Afrika, 04 December 2019
Arbaco 4 December 2019
Kenya: Jago ra'iisul wasaare oo la doonayo in la abuuro
Dalka Kenya waxa ka socda dood la xiriirta hindise la doonayo in is-beddel loog sameeyo qaabkii hogaamineed iyo doorasho ee dalka markii hore ka jirtay, ayada oo lasoo kordhinayo jagada ra'iisul wasaaraha.
Wasiirka difaaca Itoobiya oo ka hor-yimid qorshaha Abiy
Wareysi uu siiyey laanta Afaan Oromo ee VOA, ayaa wasiirka gaashaandhigga Lemma Megerssa waxa uu ku sheegay in xasilooni darrada dalka ka jirta ay la macno tahay inay tahay waqti aan habbooneyn in xisbi cusub la abuuro.
Hantida Robert Mugabe oo la Shaaciyay
Qoyska madaxweynihi hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa u gudbiyay maxkamad sare oo ku taalla magaalada Harare cadadka hantida uu ka tagay, taasoo la sheegay in qoysku uu rabo in si sharci ah loogu qeybiyo dhaxalka uu uga tagay Mugabe.
Wada-hadallo Qaahira uga furmay Masar, Sudan iyo Itoobiya
Wareegii labaad ee wada-hadallada u dhexee dalalka Masar, Sudan iyo Ethiopia, ayaa maanta ka furmay magaalada Qaahira ee dalka Masar.
26 qof oo ku dhintay shil ka dhacay Tunisia